Ny Fiovaovan’ny Toetrandro No Ao Ambadiky Ny Fihenan’ny Farihy Baikal Any Rosia, Hoy ireo Manampahaizanana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Jona 2015 15:27 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Deutsch, Français, русский, 日本語, Italiano, English
Ity lahatsoratra ity dia nosoratan’i Mikhail Matveeva ho an’ny 350.org, fikambanana iray manangana hetsika iraisam-pirenena momba ny toetrandro, ary navoaka ato amin’ny Global Voices ao anatin’ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
Tsy miray hevitra momba ny antony nahatonga ireo olana ireo ny manampahaizana. Nampaneno lakolosy fanairana mikasika ny fahalotoan'ny rano ireo mpikaroka maromaro avy amin’ny Ivontoerana momba ny “Limnology” izay manao antso avo amin’ny tsy maintsy handraisana fepetra maika mba hamerana ny fivarinan’ny rano maloto ao anaty farihy. Ny votoatin’ny rano marivo sy ny fiakaran’ny maripana avo dia avo no hitan’i Nina Abarinova aloha, izay solontenan’ny ministeran’ny Tontolo iainana sy ny harena voajanahary ao amin’ny Faritry Irkoutsk, ho tena fototry ny olana.
Ity zava-mitranga any Rosia ity dia ohatra iray ihany amin’ny porofo mivaingana fa tsy milaza zava-tsoa mihitsy ny fiakaran’ny maripàna, eny fa na dia ho an’ny hatsiaka Rosiana aza. Mampalahelo anefa fa zara raha miraharaha ireto olana iraisam-pirenena ireto ny fiarahamonina Rosiana ankehitrio, eny fa na dia efa mihamafy aza ny fandondom-baravaran’ny zava-misy. Ny hany fanantenana angamba dia ny fanentanana mety hataon’ny fikatrohana ara-toetrandro eo amin’ny faritra mikasika ity olana goavana indrindra miseho amin’ity taonjato faha-21 ity, indrindra koa moa fa nahomby ireo tetikasa voalohany efa natao.
Vaovao farany: Raha teo am-panomanana ity lahatsoratra ity dia nisy loza hafa indray namely ny faritra. Nisy dorotanety namely ny tanànan’ny Khakassia sy Tyva (akaikin’i Baikal) izay namoizana ain'olona mihoatra ny 30 sy namela tsy manan-kialofana an-jatony. Ny toetrandro “tsy mbola fahita velively” tany aloha – andro mafana sy rivo-mahery – no notsinian’ny Governoran’i Khakassia ho antony tena nahatonga ny loza.